NYI LYNN SECK 18+ DEN: Birds of Myanmar
Posted by NLS at 12/23/2009 11:15:00 PM
12 Responses to “Birds of Myanmar”
(ပုတ်သင်ညိုတွေတော့ တှောတှောများများ ခွစာကျွေးခဲ့ဖူးတယ်။)
ိထို့ကြောင့် ကြီးလာသောအခါ ကိုယ်တိုင် လူ့ခွစာ ဖြစ်သွားသည်။ (ဝဋ်လည်တာ)
ငှက်များမျိုးတုံးပျောက်ကွယ်ကုန်ချင်း၏ တရားခံထဲတွင် သစ်တောများပြုန်းတီးခြင်းက ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ပါသည်။ တောတွေကိုသာ လူတိုင်းက အခုလို မဆင်မခြင်ခုတ်နေကြရင် နောက်ဆို ငှက်ပါမကဘူး။ လူတွေပါ မျိုးတုံးမှာ။
တောဘက်မှာ လူတွေ သစ်တောကို ခုတ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်အောင်လို့ပာ။ သစ်ခုတ်ပြီး နိုင်ငံခြား ရောင်းစားတာနဲ့တော့ မတူဘူး။ ဒာပေမယ့် သစ်ပင်ခုတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက် အသိဉာဏ်ကို ပြည်သူပြည်သား အားလုံးသိအောင် လုပ်ရမှာက အစိုးရတာဝန်။ လူတွေ မဆင်မခြင် ခုတ်နေကြတာထက် အဲဒီလူတွေမှာ အသိဉာဏ် ရှိလာအောင် မလုပ်နိုင်တာက ပိုဆိုးတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ပြောရရင်တော့ ဘယ်သွားသွား ဒီနားပဲ ဆိုက်တော့မှာပဲဗျာ။ စကားမစပ် ထူးဆန်းတာက မြန်မာပြည် ပရောဂျတ်တွေထဲမှာ ဆုံးရှုံးတဲ့ ပရောဂျတ် တစ်ခုမှ မရှိဘူးဗျာ။ အားလုံး အောင်မြင်တာမှ ရာခိုင်နှုန်းကြီးကြီးနဲ့ အောင်မြင်ကြတာ။ အစီရင်ခံစာတွေအရ ပြောတာပာ :D
NLS ကတော်တော်စုံ တာဘဲ..။
ငှက်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဟိုးတုန်းကရေးထား တာကို ကျွန်တော့်ဘလောက်မှာတင် ထားပါ တယ်။ http://anasiantouroperator.blogspot.com/2009/06/myanmar-best-birding-site-in-southeast.html
တောကလူတွေက မသိလို့ ခုတ်ပါသည်။ မြို့က လူတွေက သိသိကြီးနှင့် တမင်သက်သက် ရောင်းစားချင်၍ ခုတ်ပါသည်။ မည်သူက အပြစ်ပိုကြီးသနည်း။ ကျွန်တော်ဆက် မပြောတော့ဘူး။ :-P
ကျွန်တော့် ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ သစ်တော လိုအပ်တာ ငယ်ငယ်တည်းကသိတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတွေပြောနေကြတယ်.. ပုပ္ပါး တောင် နဲ့နီးလို့ မိုးကောင်းတာတဲ့။ ကျွန်တော့် အိမ်မှာ ရှားတော တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ ပင်ပျိုတောကို ၀ိုင်းခတ် ပျိုးပါတယ်။ ပင်အိုတောကို ထင်းခုတ်ပါတယ်။ အပင်အခြေက ခုတ်လှဲတာ တစ်နှစ်နေလို့ တခါ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ မိသားစုထဲက အကို အစ်မ တွေ အိမ်ထောင်ခွဲမယ်ဆို ကျွန်းသား ၀ယ်မရလို့ အပင်ကြီးရှည်ဖြောင့်တဲ့ရှားပင်ကို 6" ပတ်လည် လေးလုံး ခွဲဖို့ ခုတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် တောကိုမွေးပါတယ်။ တစ်နှစ်တခါ ထင်းခုတ်တယ်ဆိုပေမယ့် အလကားနေ ခုတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ စီးပွားဖြစ်ခုတ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ကားလမ်းဘေးက တောင်နီတောင်၊ မြသိန်းတန် တောင်တို့မှာ ဒဟတ်သားပေါပါတယ်။ ဒဟတ်သားကိုတော့ ထင်းလဲခုတ်တယ် ကွမ်းခြံစိုက်ဖို့လဲ ခုတ်ကြတယ်။ ပြောလောက်အောင် တောမပြုန်းပါဘူး။ ခုတ်ပီးရောင်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ တောပြုန်းတာက အမြောက်တပ်လာမှ ပြုန်းတာပါ။ မယုံလဲ ပုံပြင်မှတ်ပေါ့....... :D
ငှက်ကလေး တွေ အကြောင်း လာဖတ်ပါတယ်
ကိုယ်တွေ့မို့ ကိုဆန်းဝင်း ပြောတာကို ထောက်ခံပာ၏။ :D
တကယ်တော့ သစ်တော ခုတ်တယ် ဆိုတာကလည်း ပြောရရင် အပြစ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပာဘူး။ သစ်တောကနေ တိုင်းပြည်ဘဏဿဍာရတယ်။ ဒာပေမယ့် ခုတ်ပြီးရင် ပြန်စိုက်ဖို့တော့ လိုအပ်တယ်။ အခုဟာကတော့ Demand နဲ့ Supply မမျှဘူးလို့ မြင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘူးသီးနုနု ခူးကြတဲ့ ကိစဿစတွေပာ။ သက်တမ်းမရင့်သေးတဲ့ သစ်ပင်တွေပော့ဗျာ။
ကျောက်ပန်းတောင်းက မိုးကောင်းတယ်မှန်း မသိခဲ့ဘူး။ ခဏခဏ ရောက်ဖူးတယ်။၊ ဖြတ်သွားဖြတ်လာပါ။ ရောက်ဖြစ်တဲ့ အချိန်က နွေရာသီဘက်ပဲ ဆိုတော့ တခြားနေရာတွေလိုပဲ မှတ်တာ။
တိုင်းပြည်ဘဏဿဍာရတယ်ဆိုလို့။ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဟောပြောပွဲမှာ ပြောသွားတာ နားထောင်ရတယ်။ ကိုယ်က ပညာမတတ်တော့ သစ်တောင်မှ အလုံးလိုက်ရောင်းတယ်တဲ့။ လုပ်တတ်တဲ့သူက နိုင်ငံတကာ ဒီဇိုင်းပြန်လုပ်လိုက်တော့ ၂ ဆ ၃ဆ မြတ်သွားတယ်ဆိုပဲ။ အခုတော့ နည်းနည်းလေးတတ်လာလို့ အလုံးလိုက်မရောင်းပဲ ခွဲရောင်းသတဲ့။ :D
natural resource ဆိုတာ ပွားများအောင်လုပ်ဖို့၊ ရောင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူး။ ရောင်းစားလို့လဲ ဘာပညာမှ ပိုတတ်မလာဘူး။ natural resource ကို မမှီခိုဘဲ human resource ကိုအားကိုးပြီး တိုးပွားအောင်လုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Birds of Myanmar တော့ မဟုတ်ဘူး။ Birds of the World တဲ့။ အင်တာနက်ပေါ်လိုက်ကြည့်ရင်း တွေ့မိလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ် အစ်ကို။ အစ်ကိုလဲ စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်လို့။ ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ ဆော်တီး အစ်ကိုရေ .. :) ။